China Aluminium Ball Emeputa na Supplier | Lixin
Purelọ ọrụ dị ọcha aluminom nwere njirimara nke plasticity dị elu, nkwụsị corrosion, nrụpụta eletriki na ikuku ọkụ. N'ihi njirimara dị arọ nke aluminom, bọọlụ aluminom na-ejikarị arụ ọrụ ụgbọ ala metụtara usoro nchekwa.
Ihe onwunwe 1060/1070/5056
Njirimara 1-Ibu ọkụ, ezigbo ọkụ eletrik na ọkụ
2-High corrosion eguzogide ma ala n'ibu ike
3-Na-arụ ọrụ dị mfe, gbapuo ma pịa
% Ndị ọzọ (nke ọ bụla)
% Ndị ọzọ (ngụkọta)
Aluminom bọọlụ nke ejiri ezi corrosion na-eyi nguzogide, ezigbo mma imecha ya. 1xxx usoro alloys anaghị ekpo ọkụ. Enwere ike inye bọọlụ ndị a na ọnọdụ agabiga. 5xxx usoro alloys na-egosipụta ezigbo ọrụ.
1xxx usoro alloys na-enye mma corrosion eguzogide ekele na ha dị ọcha. Ezigbo nguzogide na mmiri niile. 5xxx usoro alloys nwere mma megide chlorides na alkaline ngwọta. Ezi ikuku corrosion na-eguzogide ma na mmiri ohuru, mmiri mmiri, organic asịd, aldehydes. All aluminum alloys na-doro pitting corrosion na ọnụnọ nke chlorides.
Special biarin na valves, akara ọcha (anuahade bọọlụ), akpakanamde ụlọ ọrụ (nchekwa ngwaọrụ), ụgbọelu na aerospace ụlọ ọrụ, electronic ụlọ ọrụ, ịgbado ọkụ Filiks.
1. Erughị 45KGS, anyị ga-eziga site awara awara. (Ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ, adaba)
2. N'etiti 45-200 KGS, anyị ga-ezipụ site na njem ụgbọ elu. (Kachasị nchebe na nchekwa, mana ọnụ)
3. Karịrị 200 KGS, anyị ga-ezipụ site n'oké osimiri. (Dị ọnụ ala ma na mbụ)
1. TT, 50% ịkwụ ụgwọ tupu oge dị ka nkwụnye ego, nhazi tupu nnyefe.
2. L / C na anya. (ụgwọ ụlọ akụ dị elu, anaghị atụ aro, mana ịnakwere)
3. 100% Western Union n'ọdịnihu. (pụrụ iche maka mbupu ikuku ma ọ bụ obere)
Nke gara aga: Cylindrical ala agba
Osote: Bọọlụ Brass
Oghere Aluminium Na-emeghe
Oche Belt Aluminium Ball
Ihe na-egbuke egbuke nke Aluminom
Ezigbo Aluminium Ball
Bọọlụ Aluminom siri ike
Anọ ahịrị Cylindrical ala agba, Cylindrical ala agba 20x47x14, Obere ọla kọpa, Brass Ball Lelee Valve, Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba, Cylindrical ala agba 25x52x15,